Waa kuwee labada koox ee ugu cad cad saxiixa David Alaba? – Gool FM
Waa kuwee labada koox ee ugu cad cad saxiixa David Alaba?
(Munich) 29 Maarso 2021. Wakiilka laacibka difaaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee David Alaba ayaa sheegay labada koox ee ugu cad cad saxiixa xiddiga uu wakiilka u yahay.
Pini Zahavi oo ah wakiilka Alaba ayaa sheegay in Barcelona iyo Real Madrid ay yihiin kooxaha hoggaanka u haya loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga reer Austria.
David Alaba ayaa ka mid ah xiddigaha waaweyn ee suuqa xagaagan qaabka bilaashka ah lagu heli karo maadaama uu dhammaanayo qandaraaska uu kula jiro naadiga Bayern, waxaana xiiso badan u muujinaya kooxo badan oo ay ku jiraan Chelsea iyo PSG.
Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya in kooxaha La Liga ku xafiiltama ay hoggaanka u hayaan tartanka loogu jiro saxiixa Alaba kaasoo xaqiijiyay inuu isaga tagay Allianz Arena kaddib 13 sano oo uu ku sugnaa halkaas.
“David ayaa dooran doona kooxda ku guuleysata tartanka” ayuu Pini Zahavi u sheegay jariiradda Kicker, waxaana uu intaas raaciyay in kooxaha Spain ay hor kacayaan kooxaha xiddigan gacanta ku dhigi kara.
Zahavi ayaa sidoo kale tibaaxay inay wali wada xaajood kula jiraan kooxo kale, suuro galna ay tahay inay ka weecdaan Spain inta ka dhimman suuqa kala iibsiga.
Los Blancos oo ka cabsi qabta inuu Sergio Ramos bilaash kaga tago ayaa dooneysa in Alaba ay ku daboolaan booska kabtanka xulka qaranka Spain iyo naadiga Madrid, halka Barcelona oo ku tashaneysa xiriirka ka dhexeeya Zahavi iyo Madaxweyne Laporta iyaduna dooneyso saxiixa laacibkan inay gacanta ku dhigto.